Kalkaalisooyinka-Umulisooyinka Columbus, Kooxda Kalkaalisooyinka-Umulisooyinka OH
La kulan kalkaalisooyinkeena-umulisooyinka
Kalkaalisooyin Caafimaad oo Umuliso ah maareeyaan daryeelka OB / GYN ee haweenka da 'kasta leh, iyadoo diiradda la saarayo fayoqabka, ka hortagga cudurrada, iyo daaweynta cudurrada yaryar. Waxay ku takhasusaan daryeelka uurka, qorsheynta qoyska, cilladaha caadada, dayska, iyo baahiyaha kale ee haweenka. Waxay bixiyaan taageero shucuur ah iyo sidoo kale talobixin hufan, oo diiradda la saaro fayoqabka, iyo ka caawinta bukaanada inay sameeyaan xulashooyin xog ogaal ah.
Intaas waxaa sii dheer, kalkaalisooyinka umulisooyinka la xaqiijiyay oo bixiya foosha, dhalmada, iyo daryeelka dhalmada ka dib. Daraasaduhu waxay ogaadeen in daryeelka kalkaalisada-umulisada ay tahay mid amaan ah oo shaqsi ahaaneed, taasoo dhalisay in yaraado qalliinka, episiotomies, iyo dhicis ama dhalasho miisaan yar oo dhicis ah Kalkaalisooyinka-umulisooyinka ka shaqeeya PWHealth ma sameeyaan dhalashada guryaha - Bixinta ayaa ku taal Riverside, St. Ann's, iyo OSU Hospitals. QALDAN CAADI AH ayaa ah in kalkaalisada umulisada ee foolaneysa aysan isticmaali karin daawo xanuun. Daawada xanuunka iyo suuxdinta ayaa loo heli karaa bukaanka.
LiZa Canowitz, MS, CNM
Liza Canowitz, MS, CNM, waxay siisaa daryeel iyo waxbarasho haweenka inta ay nool yihiin. Kalkaaliye caafimaad umuliso ahaan, waxay ku takhasustay baaritaanka cudurada haweenka, la talinta ka hortagga uurka, caadada joojinta, qorsheynta qoyska, dhalmada ka hor, foosha iyo dhalida, iyo daryeelka dhalmada ka dib.
Liza waxay ka heshay Bachelors of Science in Nursing ka Mt. Kulliyadda Kalkaalisada ee Karmel. Waxay ka heshay Masters of Science ee Kalkaalisada Umulisada ee Jaamacadda Ohio State. Arday ahaan OSU, Liza waxay fursad u heshay inay doorbidaan dhakhaatiirta ka hawlgala PWH hal sano. Waxay qaran ahaan iyo gobol ahaanba u aqoonsan tahay umuliso caafimaad.
Kahor inta uusan ku biirin PWH bishii Oktoobar ee 2005, Liza waxay ku tababbartey sidii Kalkaaliye Caafimaad oo Diiwaangashan oo foosha / umulinta ah iyo unugyada hooyada / dhalaanka. Waxay sidoo kale khibrad u leedahay maamule kalkaaliye caafimaad iyo kalkaaliso kala-soocid ah oo ku sugan xafiisyada umulisada iyo dumarka ee mashquulka badan.
Waxaa lagu soo koray Chillicothe, Ohio, Liza waxay hadda degan tahay New Albany iyada iyo caruurteeda Abram, Meryn, iyo Jillian.
Ujeedada Liza Canowitz waa in lagu xoojiyo haweenka inay gaaraan himilooyinkooda daryeelka caafimaad iyagoo siinaya daryeel caafimaad iyo waxbarasho dhammaan heerarka nolosha haweenka.
Lindsay Randolph, MS, CNM, WHNP
Lindsay Randolph waxay u haysaa daryeelka caafimaadka haweenka iyo qoysaskooda inta ay nool yihiin. Iyada oo ah Umuliso Kalkaaliye Caafimaad ah iyo Dhakhtarka Kalkaalisada Caafimaadka Haweenka, waxay ku takhasustay cudurada haweenka, la talinta ka hortagga uurka, caadada joojinta, qorsheynta qoyska, dhalmada ka hor, foosha iyo dhalmada, iyo daryeelka dhalmada ka dib.
Lindsay waxay ka heshay Bachelor of Science Jaamacadda Ohio State University sanadkii 2004. Waxay ka heshay Masters of Science ee Kalkaalisada Umulisada iyo Caafimaadka Haweenka bishii Ogast 2008, sidoo kale waxay ka qaadatay Jaamacadda Ohio State. Kahor intaan la dhameystirin tababarka sayidkeeda, Lindsay waxay ku biirtay PWH si ay labadaba ula tababarto layliyaasha PWH muddo hal sano ah isla markaana ay uga shaqeyso gudaheeda tababarka kalkaaliso kala sooc ah. Lindsay waa umuliso caafimaad oo heer qaran ah oo heer gobol ah iyo kalkaaliye caafimaad oo haween ah. Lindsay sidoo kale waa Aqoonyahan Shahaado Bixiyay Dhalmada.
Lindsay waxay haatan degan tahay Dublin iyada iyo wiilasheeda Fletcher iyo Flynn.
Katie Waibel, MS, CNM
Katie waa Umuliso Kalkaaliye Caafimaad oo Shahaado leh. Waxay ku takhasustay cudurada haweenka, ka hortagga uurka, qorsheynta qoyska, daryeelka dhalmada ka hor, foosha iyo dhalmada, iyo daryeelka dhalmada ka dib.
Katie waxay shahaadada Bachelor-ka ka qaadatay Jaamacadda Ohio ee cilmiga bayoolajiga. Kadib waxay heshay Master-keeda Sayniska ee Kalkaalisada Umulisada iyo Caafimaadka Haweenka bishii Nofeembar 2009. Katie waxay ku soo biirtay xafiiska si ay labadaba tababar ula qaadato dhakhaatiirta ka hawlgala PWH muddo hal sano ah waxayna ka shaqeysaa howsha iyada oo ah kalkaaliye caafimaad kala sooc. Waxay bilawday inay ku shaqeyso sidii Umuliso Caafimaad oo Certified ah bishii Diseembar, 2009.
Katie waxay ku barbaartay Pickerington, waxayna hada degan tahay Westerville iyada iyo ninkeeda, Greg, wiilashooda Gregory iyo Owen, gabadha Kylie, iyo eygooda Gracie.
Kimberly Miller, MS, CNM
Kimberly Miller, MS, CNM, waxay ku biirtay Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka Oktoobar 2013. Kaaliye Caafimaad oo Kalkaaliso-Caafimaad ah, waxay siisaa adeegyo daryeel caafimaad dumarka laga soo bilaabo qaan-gaarnimadooda wixii ka dambeeya xilliga dhalmo-dayska. Adeegyadan waxaa ka mid ah adeegyada cudurada haweenka iyo qorsheynta qoyska, daryeelka ka horreeya uurka, daryeelka muddada uurka, dhalmada iyo muddada dhalmada ka dib.
Kim waxay ka heshay Bachelors of Science in Nursing ka MedCentral College of Nursing, oo hada loo yaqaan Ashland University, bishii Sebtember 2010. Kadib waxay sii waday inay dhameystirto Masters of Science ee Kalkaalisada-Umulisada iyo Caafimaadka Haweenka ee Jaamacadda Ohio State bishii Ogos 2013. Waxay degan tahay. oo ku taal Lewis Center ninkeeda, Anthony, iyo 4 carruurtooda ah.
Sheryl gaad, MS, CNM
Sheryl Rife, MS, CNM, waxay siisaa daryeel iyo waxbarasho haweenka inta ay nool yihiin. Kalkaaliye caafimaad umuliso ahaan, waxay ku takhasustay baaritaanka cudurada haweenka, la talinta ka hortagga uurka, caadada joojinta, qorsheynta qoyska, dhalmada ka hor, foosha iyo dhalida, iyo daryeelka dhalmada ka dib.
Sheryl waxay ka heshay Bachelors of Science in Nursing ka Mt. Kulliyadda Kalkaalisada ee Karmel. Waxay ka heshay Masters of Science ee Kalkaalisada Umulisada ee Jaamacadda Cincinnati. Arday ahaan Jaamacadda Cincinnati, Sheryl waxay fursad u heshay inay doorbidaan dhakhaatiirta ka hawlgala PWH muddo hal sano ah. Waxay qaran ahaan iyo gobol ahaanba u aqoonsan tahay umuliso caafimaad.
Kahor inta uusan ku biirin PWH bishii Luulyo 2017, Sheryl waxay u tababbartay sidii Kalkaaliye Caafimaad oo Diiwaangashan oo foosha / dhalmada ah ka dibna waxay ahayd Umuliso Shahaado Leh oo ka tirsan Kooxda Caafimaadka ee Carmel.
Waxaa lagu barbaaray magaalada Youngstown, Ohio, Sheryl waxay hada degan tahay Columbus iyada iyo ninkeeda iyo wiilkeeda, Brecken.
Natalie Bennett, MSN, CNM, CNP
Natalie waxay ku biirtay Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka 2018 sidii kalkaaliye caafimaad. Tan iyo markaas, waxay ku dhammaysatay Shahaadada Master-ka ee umuliso oo hadda waxay sidoo kale tahay umuliso kalkaaliso shahaado ah. Waxay aad u xiiseysaa bixinta umuliso baaxad leh iyo daryeelka caafimaadka haweenka.
Natalie waa 2011 ka qalin jabisay Hocking College, halkaas oo ay ku qaadatay Associate of Applied Sciences ee shahaadada kalkaalisada. Taas ka dib, waxay dhammaysatay shahaadadeeda koowaad ee Sayniska Kalkaaliyaha Caafimaadka ee Jaamacadda Ohio 2013 ka hor intaysan ku laaban Jaamacadda Otterbein oo ay ka qaadatay Master of Sayniska Kalkaaliyaha, iyada oo ka qalin jabisay 2018. Waxay ku dhammaysatay Shahaadada Master-ka ee Shahaadada Umuliso ee Jaamacadda Gobolka Ohio 2021. Natalie Waxay leedahay khibrad kalkaalin caafimaad oo ballaaran oo ay ku jiraan foosha iyo dhalmada, umusha ka dib, ambulator OB/GYN, wadnaha, iyo daryeelka muddada-dheer.
Natalie waxay u dhalatay Athens, Ohio waxayna hadda ku nooshahay Grove City.
AMANDA STELLER, CNM
Amanda waxay ka heshay Bachelor-ka Jaamacadda Ohio State sanadkii 2012. Waxay RN uga shaqaysay Xarunta Caafimaadka ee Gobolka Ohio ee Wexner ee ku taal barkadda Caafimaadka-Qalliinka Dabaasha. Kadib waxay daba gashay Masters of Science ee Kalkaalisada Umulisada ee OSU bishii Ogosto 2019. Amanda waxay ahayd ardayad kalkaalisada umulisada ah ee Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka muddo hal sano ah ka hor inta aysan bilaabin howsha Oktoobar 2019. Waa Umuliso Umuliso qaran ahaan iyo gobol ahaanba. Waxay aad u jeceshahay inay barato haweenka heerarka caafimaadkooda inta ay nool yihiin iyo sidoo kale inay daryeesho haweenka inta lagu jiro daryeelka uurka iyo dhalmada.
Amanda waxaa lagu barbaaray aagga Chicago, oo hadda waxay deggan tahay Columbus iyada iyo ninkeeda, Andrew, iyo wiilkeeda Aiden!
Laga soo bilaabo daryeelka foosha iyo daryeelka dhalmada iyo adeegyada qorsheynta qoyska, kalkaalisooyinkayada umulisooyinka la aqoonsan yahay (CNM) waxay maareeyaan baahida OB / GYN ee haweenka da 'kasta leh.
Goobta Dublin Goobta Westerville Goobta Columbus